Aza mandalo fasana izay saro-tahotra e !
mardi, 07 mars 2017 10:58
« Ny vositra no miady ka ny tàmana no tera-tay » I Andry Nirina Rajoelina sy Ravalomanana Marc no tokony hifaninana amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ka ny alika any ambany sarety no mivovo sahady hoy ny fitenenan-jatovo izay.
Mafy loatra ve ny hafanam-po ka mamoron-dainga no niafarany kanefa mba mihevi-tena ho mpikirakira serasera matihanina ihany ? Samy lehilahy nohosoran’ny reniny menaka ireo ka tsy matahotra ny hiady ambony vatolampy ka aza mandainga na manely tsaho ry mpanao gazety mpiana-draharaha lalandava sa matahotra sahady ?
Mba hampazava ny fandresena na faharesena dia izay hahatsara toerana an’i Ravalomanana Marc no tokony himatimatesan’ny mpomba azy fa tsy ny hanenjika sy ny hamoron-dainga momba an’i Andry Nirina Rajoelina raha araka ny fanirian’ireo mpanara-baovao politika te hahita fifidianana sy vokatra tena marina.
Hanao ahoana ny zanak’i Dada raha milatsaka ho fidiana Rajoelina ? ho voan’ny tandimerina izany ? « Mbola tsy manao fanambarana amin’ny fomba ofisialy akory i Andry Nirina Rajoelina dia efa izany no fipararetan’ny mpifaninanana aminy » hoy ireo manao sangy mahery. Samborina sy ilàna sotasota ny mpomba azy noho ny tahotra ny heriny kanefa diso tanteraka ilay tetika. Mpandinika raharaham-politika maro no manamafy izany « Enjehina izy vao mainka mamiratra » hoy ireo mpomba ny Mapar tena izy.
Ho hita eo moa ny amin’ny 2018.